कसरी सोल-IELESK मा प्राप्त गर्ने?
समय मा समय: 22-24 घण्टा (समयलाई संकेत गर्दछ र सडकमा यातायात र मौसम स्थितिमा निर्भर गर्दछ)।
ILALTSK ओरेबर्गन क्षेत्रमा अवस्थित एउटा सानो शहर हो, रसिया र कजाखस्तान, म्यूरियरनबर्गबाट ​​970 20 किलोमिटर हो। इजरायलको प्रख्यात मृत समुद्रको साथ संरचनाको संरचनामा कम, संरचनाको नजिक छ। सब भन्दा प्रसिद्ध ताल पतंग हो, पानीमा नुनिलो छ, जसले तपाईंलाई यसको सतहमा सुत्न अनुमति दिन्छ, र नुन सीमाको संरचनाको कम्पोजिटसँग मिल्दोजुल्दो छ।
सोलो-आईलेटमा, त्यहाँ सात तालहरू छन् जुन एक चिकित्सीय प्रभाव छ। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नै तरिकाले:
पतन ताल एक व्यापक ज्ञात विश्व हो, जुन पर्यटकहरूको मुख्य प्रवाह संकलन गर्दछ। यो नुन तलछट, चिकित्सा माउड र विशेष तापमान शासन छ। उसको पानी ठूलो फ्रिजबाट फ्रिज गर्दैन!
उपचार गवाही: स्मरणार्थको प्रणालीको रोग, ज्ञाटोल रोग, जहाजका जहाजहरू, अटोनिक डेर्मटिटिटिस र बच्चाहरूको एक्सेमा।
साल-आईलेटस्क रिसोर्ट ओरेबर्गर्ग क्षेत्रको सबैभन्दा प्रसिद्ध शहर हो। उनले अनौंठो नुन तालहरूको उपचार गुणहरूको खर्चमा पर्यटकहरूको सहानुभूति जितेका थिए। प्रत्येक वर्ष धेरै व्यक्तिहरू यहाँ छुट्टीमा आउँछन्, जुन स्वास्थ्यमा उपयोगी प्रभावको साथ मिल्दछ। पुरानो रोगहरू रोक्न एकै समयमा शरीरलाई सुदृढ पार्न चाहनुहुन्छ र शहरबाट विश्राम लिनुभयो? हाम्रो स्को समीक्षाले भर्नुहोस् र सही निर्णय लिनुहोस्।
धेरै छिमेकी क्षेत्रहरूमा टाटास्टन, मारी एल, चाउशिया, आदि सहित मिलिबस र पछाडिको विशेष उडानहरू छन्। उर्फको लागि सुरक्षित गर्न संगठित यात्रा कम्पनी द्वारा "परिवार सूटकेस" द्वारा गरिन्छ।
स्वतन्त्र यात्रा कम सहज र अनुमान गर्न योग्य छ। एयरपोर्टको अभाव रिसोर्टको लागि एक ठूलो माइनस हो। युएएएएएफए, कस्तु, नोवोरिसक र अन्य प्रमुख शहरहरूबाट विमानहरू प्राप्त गर्दै, तपाईंले ओरेबर्गमा टिकट लिनु पर्छ। सेन्ट पीटर्सबर्ग र मस्को (हिरालागी र डोर्डिओभोभोका एयरपोर्टहरू) बाट दैनिक उडानहरू यसलाई सजिलो बनाउँदछ, तर तपाईंले थोरै पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ। क्षेत्रीय केन्द्रमा पुग्ने धैर्यता प्राप्त गर्दैछ र के भइरहेको छ रोज्न छ।
बसहरू नियमित रूपमा जान्छन्, यात्रा समय 1 25-2 घण्टा मात्र हो। Min0:00 देखि 20:00 देखि 20:00 देखि 20:00 देखि 20:00 देखि 20:00 देखि। भाडा 100 रूबल छ। ट्रेनमा तपाईले स्टेशन आईलेट -1 1 (करिब 400 मिनेट बर्बाद गर्न सक्दछ)। ट्याक्सी ड्राइभरहरूले करीव 50000 रूबलहरू लिन्छन्, तर यदि तपाईं पर्खनुभयो र जस्तो देखिनुहुन्छ भने, तपाईं 100 रूबलका लागि "यात्री" जान सक्नुहुन्छ।
रिसोर्टलाई रसियाको कुनै पनि जिल्लाबाट ट्रेन, बस वा कार द्वारा पुग्न सकिन्छ। हामी यस्तो अभिषिक्तुभियन चलायौं:
प्रत्यक्ष ट्रेनको मस्को-बिश्केस्क, जुन व्यक्तिहरूको लागि धेरै सुविधाजनक छ वा हवाई ट्राफिक प्रयोग गर्न सक्दैन। ऊ कजान रेलवे स्टेशनबाट बाहिर निस्कन्छ, टिकट मूल्य केवल 1. 1.5 हजार रूबलहरू हुन्छ।
यदि तपाईंले ekereintburg बाट कार द्वारा ड्राइभ गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईंले मार्गहरू m5, P240, P239 मा सार्नु आवश्यक छ। तपाईसँग नेभिगेटर हुनु नै उत्तम हो, किनकि यस अवस्थामा तपाईं पार्किंग र क्याम्पिंगको बारेमा अग्रिम सिक्न सक्नुहुन्छ। उही समयमा, त्यहाँ केहि कविताहरु मा सोल-Iletsk को अग्रणी छन्, त्यसैले कुनै पनि कुनै एक अक्सर भ्रमित गर्दछ र सबैजना आफ्नो कारहरूमा सफलतापूर्वक हुन्छ।
शहरमा, शहर, धेरै प्वालहरू र चसल्लाको मोटि ing ्ग, त्यसैले तपाईंले ध्यान दिएर जान आवश्यक छ।
पैदल यात्री क्षेत्र र सामान्यमा फुटपाथहरू, रूसी गहिराई, सर्तको लागि। त्यहाँ ठाउँहरू छन् जहाँ कोटिंग पहिले नै अपडेट गरिएको छ, यदि त्यसो भए पनि ...
सोल-कीलेटकको शहर ओरेब्यूनबाट 700 किलोमिटर अवस्थित छ, यो केन्द्रीय एशियाको काजाकिस्तान र राज्यहरूसँग रूस जडान गर्दै थियो।
सोल-कीलेटकको मुख्य आकर्षण, पुरानो नुन घटनाक्रमको साइटमा गठन गरिएको तालहरूको समूहको समूह हो। पानीको निर्माणको आधारमा सोल-आईलेलेस्केस्क जम्मा रूसको राष्ट्रिय डोमेन हो।
अद्वितीय तालहरू समुद्री सतह माथि 120 मिटर उचाइमा अवस्थित छन्, 53 53 हेक्टर क्षेत्रमा अवस्थित छ। तालहरू उनीहरूको संरचना, तापमान शासन र चिकित्सीय कार्यमा अद्वितीय छन्। चिकित्सकीय माटो, ढु stone ्गा नुन, बलात्कार र सोलो-जेलेटक स्टेपाको विकास र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू कुनै शताब्दीसँग कुनै शताब्दी हुँदैन। तालहरूमा मानिसहरू धेरै वर्षदेखि अवस्थित छन्।
perminterur-f alm बाट सोल-आईलेट लिनको लागि ब्याच टेस्टहरू प्रदान गर्दछ। टुरको लागत हो: होटलमा आवास, पर्यटक वर्ग बस, बिमाको यात्रा। KYCI: बच्चाहरू (12 बर्ष सम्म समावेशी) - 200--500 रूबलहरू, निवृत्तिभरणकर्ताहरू र उक्साइरीहरू (विक्रेता सहभागीहरू) - 200 रूबलहरू। म तिम्रो ध्यान दिन्छु! ताललाई प्रवेशद्वार भुक्तान भयो - 2500 रूबलहरू। केही कोटीहरूको सबै कोटीहरूको लागि। पुन: प्रवेशका लागि, शुल्क पनि चार्ज गरिएको छ।
सोल-IMLESK को वातावरण कन्टिनेन्ट हो, तातो गर्मीको साथ र जाडोमा चिसो। सापेक्ष आर्द्रता 500 देखि% 0% देखि% 0%, जुन मानवको लागि सबैभन्दा उपयुक्त सीमित हुन्छ। न्यानो दिनहरूको सुरुवातले पानीको तापक्रम बढ्दछ र 34--36 डिग्री सेल्सियस पुग्छ।
मा मिति, lead तालहरू मेरो रचना बस्तीलोजिकल संसाधनको दृष्टिकोणमा भाग लिइन्छ,
1। नुनिलो - बलात्कार, टेबल साल को उच्च एकाग्रता, लेक पतन भएको: ताल पतंग (धेरै नुन पतन), ताल नयाँ (1 15 g / l)।
2। माटो - माउद, प्रवासी फोहोर र बलात्कार, लेक तूजरी र ताल डिमिनो (BROMO), भोकमने फनेल (1 150 g / l)।
3। खनिज - सानो शहर ताल (दुर्लभ फ्याक, 30 g / l), एक ठूलो शहर ताल - लगभग ताजा। यी तालहरूमा पर्यटकहरू केवल आराम गर्छन्, केवल उपचारको फोहोर धुनुहोस्, अन्य तालहरूबाट नुन। तालहरू "Sulphide खनिज" हुन्।
<< p> रिसोर्टको रिसोर्टको एक न navelation ्ग प्लेटफर्मको साथ आधुनिक चरण छ जहाँ सहभागिताहरूले प्रतियोगिता र पुरस्कारहरू, सांस्कृतिक घटनाहरू प्रदान गर्दछ; तेस्रो राष्ट्रिय खाना सहित तेस्रो क्याफेस वरपर काम गर्दछ। एक ओरिएंटल बजार खोलिएको छ, जहाँ भेचिहरू भाँडोहरू, अ pe ्गुरको मैदानहरू, मेलोनहरू र चिनी-आईलेटहरू वालेट वालेट वालेट वालेटहरू किन्न सक्छन्। बच्चाहरूको लागि, खुला हावा पानी पानी पार्क सुसज्जित छ, त्यहाँ एक रेडियो जेली छ, जहाँ तपाईं एक गीत अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, एक विज्ञापन दिनुहोस् र जानकारी सुन्नुहोस्।
प्रख्यात खनिज-मक नुन-Iलेट-आईलेटहरू पाहुनाहरूलाई खुशी छन् र उनीहरूको चिकित्सीय शक्ति, काँसागत फोहोर, प्रसिद्ध हतियात, प्रसिद्ध हतियात, प्रभात तपाईंको छुट्टी खारेज गर्नुहोस् खाद्यान्न तालहरूको उपचारको साथ जस्तै:
र coloring पाठ्यक्रमहरूको प्रयोगले क्रीयर्टि of को कार्यमा, पुरानो दुखाइ सिन्ड्रोमनको राहत गर्न योगदान पुर्याउँछ, आदिमा यो ध्यान दिनुपर्दछ सोलो-Iletsk तालहरूमा किंगनीतिक प्रक्रियाहरू अपनाउने।
धेरै जसो रूसीहरू विदेशमा आराम गर्न प्रयोग गर्थे। तर दुर्भाग्यवस, मूल्य बढ्दै गइरहेको छ, त्यसैले अब विदेशमा रूसमा सबैको खर्च गर्न सक्दछ। यस कारणले गर्दा, घरेलु मनोरञ्जन केन्द्रहरू, रिसोर्ट शहरहरू गति बढ्दै छन्। यी शहरहरू मध्ये एक सोल-आईलेट्स हो।
रिसोर्ट क्षेत्रमा फर्कनुहोस्। यसको इलाकामा, एक विशाल संख्या, मनोरञ्जन पार्क र, अवश्य पनि, plack तालहरू, je जस मध्ये पूर्ण रूपमा अद्वितीय हो र प्रशस्त गुणहरू छन्। के भने, ग्रीष्स्टमा यस्तो पर्यटक सेक्सको त्यस्तो एक कारण हो। एक नि: शुल्क स्नान, एक नि: शुल्क स्नान, सूर्य लाओन्जरहरू र जैव शौचालयको साथ प्रत्येक
सोलो-आईलेट्सेकमा त्यहाँ धेरै क्याफेक्स, डिस्पोज, डिस्पोरियम, एक सम्पर्क चिडियाखाना, एक मनोरंजन पार्क, एक मनोरंजन पार्क, एक मनोरंजन पार्क, टुर डेस्कको डेस्कले तपाईंलाई मार्गहरूको विस्तृत चयन प्रदान गर्दछ। शहरको हाइलाइट बजार हो, जहाँ तपाईं स्वादिष्ट र ताजा गृह उत्पादनहरू, तल र बुनाई उत्पादनहरू, र अविस्मरणीय उत्तरकारहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।